February 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
တစ်​ခါတုန်းက လူတစ်​​ယောက်​က ဝါးပင်​​လေးတစ်​ပင်​စိုက်​လိုက်​တယ် ​ လူတစ်​​ရပ်​လောက်​ဖြစ်​တဲ့အချိန်​ သူ့ အဖျား မ​ရောက်​တစ်​​ရောက်​မှာ ကြိုးနဲ့ ချည်​​နှောင်​ထားလိုက်​တယ်​ ဒါနဲ့ သူဟာ မွန်းကြပ်​ခြင်း​တွေကို ခံစားလာရတယ်​ ကိုယ့်​အဖြစ်​ကိုယ်​ကြည့်​ပြီး ဝမ်းနည်းလာတယ်​ တ​စ်​​နေ့ ကြ​တော့ သူ့ကို ပိုင်​ရှင်​ကကြိုးဖြည်​​ပေးလိုက်​တယ် ​ အဲ့ချိန်​မှာ သူဟာ​ဖြောင့်​တန်း​နေပြီး အမြင့်​ကို ​ရောက်​​နေခဲ့တယ်​ ဘဝမှာ ချည်​​နှောင်​ခံရလို့ ဝမ်းနည်း​နေတဲ့လူ​တွေ ချည်​​နှောင်​ခံထားတဲ့ကြိုး ဖြုတ်​လိုက်​ချိန်​မှာ ကိုယ်​ဟာ သူများထက်​ ​ဖြောင့်​တန်းမြင့်​မားတယ်​လို့ သိလိုက်​ရချိန် ​ ချည်​​နှောင်​မှုကို မလွမ်းမိပါ​စေနဲ့။ ​ရွေးချယ်​မှုသည်​မိမိအတွက်​ဖြစ်​ပါ​စေ။ ဘာမထီဘွား…အ​တွေးစာစု​လေးများ < Unicode Version > တဈ​ခါတုနျးက လူတဈ​​ယောကျ​က ဝါးပငျ​​လေးတဈ​ပငျ​စိုကျ​လိုကျ​တယျ ​ လူတဈ​​ရပျ​လောကျ​ဖွဈ​တဲ့အခြိနျ​ သူ့ အဖြား မ​ရောကျ​တဈ​​ရောကျ​မှာ ကွိုးနဲ့ ခညျြ​​နှောငျ​ထားလိုကျ​တယျ​ ဒါနဲ့ သူဟာ […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 26/02/2018
ပိုမိုကြိုးစားစမ်းပါ မရေရာတဲ့ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်နေမဲ့အစား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတဲ့ ပစ္စုပန်အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ။ စိတ်နေစိတ်ထားကို အရင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါမှ ဘ၀အနေအထားကို တိုးတက်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်မည်။ ကိုယ်ပိုက်ဆံရတာ နည်းတယ်ဆိုပြီး မညီးငြူပါနှင့်၊ ကိုယ်ကအရင်ကြိုးစားစမ်းပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးတက်အောင် ကြိုးစားစမ်းပါ။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးဆိုတာ အတိတ်ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သင်ယူတတ်တဲ့ အရည်အချင်းဟာ အနာဂတ်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အထီးကျန်တဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါမှ အောင်မြင်မူရဲ့ ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်မည်။ ကြိုးစားစွန့်စားရမဲ့အရွယ်မှာ သက်တောင့်သက်သာဘ၀ကို မမက်မောမိပါစေနှင့်။ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ မျော်လင့်ချက်ရှိမှ ၀ိရိယရှိတာမဟုတ်ပါ။ ၀ိရိယရှိမှ မျော်လင့်ချက်ရှိတာပါ။ သူများက သင့်ထက်ကြိုးစားလို့ ဖိအားဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ပါ။ ဖိအားဆိုတာ သင်ထက် အများကြီးထူးချွန်နေတဲ့လူက သင့်ထက် အများကြီးကြိုးစားနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ သင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ဟာ ယာယီအားဖြင့် အောင်မြင်ချင်မှ အောင်မြင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ […]
မရေရာတဲ့ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်နေမဲ့အစား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတဲ့ ပစ္စုပန်အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ။ စိတ်နေစိတ်ထားကို အရင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါမှ ဘ၀အနေအထားကို တိုးတက်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်မည်။ ကိုယ်ပိုက်ဆံရတာ နည်းတယ်ဆိုပြီး မညီးငြူပါနှင့်၊ ကိုယ်ကအရင်ကြိုးစားစမ်းပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးတက်အောင် ကြိုးစားစမ်းပါ။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးဆိုတာ အတိတ်ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သင်ယူတတ်တဲ့ အရည်အချင်းဟာ အနာဂတ်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အထီးကျန်တဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါမှ အောင်မြင်မူရဲ့ ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်မည်။ ကြိုးစားစွန့်စားရမဲ့အရွယ်မှာ သက်တောင့်သက်သာဘ၀ကို မမက်မောမိပါစေနှင့်။ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ မျော်လင့်ချက်ရှိမှ ၀ိရိယရှိတာမဟုတ်ပါ။ ၀ိရိယရှိမှ မျော်လင့်ချက်ရှိတာပါ။ သူများက သင့်ထက်ကြိုးစားလို့ ဖိအားဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ပါ။ ဖိအားဆိုတာ သင်ထက် အများကြီးထူးချွန်နေတဲ့လူက သင့်ထက် အများကြီးကြိုးစားနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ သင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ဟာ ယာယီအားဖြင့် အောင်မြင်ချင်မှ အောင်မြင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့၊ […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 23/02/2018
စက္ကန့်​တံ ​လေး တစ်​ချက်​ခြင်း ​ပြေးလွှား​နေတာ ကြည့်​ရင်း မိနစ်​တံရဲ့ ​ရွှေလျားမှုကို ​မေ့သွားတယ်​ ​မိနစ်​တံ ရဲ့ ​ရွှေလျားမှုကို အချိန်​​ပေးကြည့်​​တော့ နာရီလက်​တံ ရဲ့ လှုပ်​ခတ်​မှုကို ​သေချာမသိလုပ်​ဘူး ​​ရုန်းကန်​ခြင်း​တွေ​ကြောင့်​ ကိုယ့်​ဘဝကို နွံနစ်​​နေပြီမထင်​ပါနဲ့ ကိုယ်​ရဲ့ အားငယ်​စိတ်​ ​မောပန်းမှုကို ခဏဖယ်​ပြီး ​သေချာကြည့်​ပါ အရင်​​နေရာထက်​ ​ရွှေ့လျှား​နေပါပြီ နာရီတစ်​လုံးမှာ စက္ကန့်​ တံ မရှိလို့ ကြီးကြီးမားမား ပြသာနာမရှိဘူး မိနစ်​တံနဲ့ နာရီလက်​တံကျန်​​သေးတယ်​ မိနစ်​တံမရှိ​တော့လို့ လည်း စိတ်​မပျက်​ပါနဲ့ အနည်းဆုံး​တော့ နာရီ ကို​တော့ သိနိုင်​ပါ​သေးတယ်​ စက္ကန့်​ တံ နဲ့ မိနစ်​တံ ရှိပြီး နာရီ လက်​တံ မပါရင်​​တော့ ဒါဟာ အသုံးမဝင်​​တော့တဲ့ အချိန်​ပြမှုပါပဲ ဘဝ ရဲ့ ဖြတ်​သန်းမှုက […]
ချီးမွမ်းတာ နဲ့ ကဲ့ရဲ့တာ
လူတွေဟာ သူတို့အတွေးနဲ့သူတို့ ချီးမွမ်းချင်ချီးမွမ်းမယ်၊ ကဲ့ရဲ့ချင်ကဲ့ရဲ့မယ်။ တစ်ခါတလေ ချီးမွမ်းစရာမဟုတ်တာကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်၊ ကဲ့ရဲ့စရာမဟုတ် တာကိုကဲ့ရဲ့တတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ စိတ်ထဲကမပါဘဲ ပါးစပ်ဖျားကချီးမွမ်းတတ်တယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် ကိုယ်ကလိုက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေရင် ကိုယ်ဟာ တော်တော်စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့သူ ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ချီးမွမ်းတာ၊ ကဲ့ရဲ့တာကို ဘယ်လိုမှသဘောမထားဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ်လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလုပ်နိုင်မှသာ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တဲ့သူလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဝေဖန်တိုင်း ကိုယ်ကစိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင် သူတို့နှိပ်စက်တာကို ကိုယ်ကခံနေရသလိုဖြစ်သွားပြီ။ လူတွေကိုတော့လေးစားပါ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ဝေဖန်တာတွေကိုတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ လူတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေဟာ တဖက်သတ်ဖြစ်နေတာများတယ်။ တကယ်မှန်ကန်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့အသိဥာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီး မျှမျှတတဝေဖန်နိုင်တဲ့သူဟာ ဒီလောကမှာ အင်မတန်ရှားတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မသေးတဲ့သူဟာ သူများကိုယ့်ကိုအထင်သေးတာကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နေတဲ့သူဟာ သူများဘာပြောပြော ခံနိုင်တယ်။ သူများကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တာကို မခံချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်နေတာကို ပိုပြီးမခံချင်ဘူး။ သူတို့တန်ဖိုးထားမှ ငါဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်။ အဲဒီလို […]
Posted in: Books, FeaturedLeaveacommentMM Book City	 22/02/2018
တစ်​ခါတုန်းက ​ခြ​င်္သေ့ တစ်​​ကောင်​ဟာ ​ရေစပ်​မှာ ​ရေသာက်​​နေတဲ့ သမင်​တစ်​​ကောင်​ကို လိုက်​ရင်းလွတ်​သွားတယ်​ ဒါကို ​ကောင်းကင်​မှာ ဝဲ​နေတဲ့ သိန်းငှက်​ကမြင်​​တော့ ခြ​င်္သေ့ကို​ပြောတယ်​ ဒီမှာ အ​ဆွေ …အ​ဆွေမှာ ကြံ့ခိုင်​သန်​စွမ်း​တဲ့ ​ခြေ​တွေလက်​​တွေရှိတယ် ​ ပြည့်​ဝတဲ့ ခွန်​အား​တွေရှိတယ်​ အစွမ်းထက်​လှတဲ့ ​ခြေသည်း လက်​သည်း​တွေရှိတယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျုပ်​လိုမပျံသန်းနိုင်​​တော့ ​ခုလိုမျက်​​ခြေပြတ်​သွားတဲ့ သား​ကောင်​ကို အ​ဆွေ ရှာမ​တွေ့​တော့ဖူး​ပေါ့ ကျုပ်​ဆို ခဏ​လေး ​ကောင်းကင်​​ပေါ်ဝဲလိုက်​တာနဲ့ သား​ကောင်​ကိုမြင်​နိုင်​စွမ်းရှိတယ် ​ ခြ​င်္သေ့က ဘာမှမ​ပြောပဲ ​ရေထဲဆင်းသွားတယ်​ အ​ဆွေသိန်းငှက်​ ကျုပ်​လို ​ရေထဲ ဆင်းပြပါဆို​တော့ သိန်းငှက်​က ​ပြောတယ်​ ကျုပ်​ ​ရေ​နေသတ္တဝါမဟုတ်​ပါဘူး ကျုပ်​အ​တောင်​​တွေ ​ရေစိုသွားရင်​ ပျံသန်းရခက်​တယ်​ ​ခြ​င်္သေ့က ပြန်​​ပြောတယ်​ ဒီ သ​ဘောတရားကို သိရင်​ရပြီ အ​ဆွေသိန်းငှက်​ ​လောကမှာ […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 21/02/2018
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး၏ အဖိုးတန်သော အဖြေများ
”အမျိုးသမီးများရဲ့ထဘီတန်းအောက်ကို ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်ပါသလား ဘုရား”” ”နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်ပါတယ် ၊ မနိမ့်ဘူးထင်ရင် မနိမ့်ပါဘူး” ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထဘီကြောင့် နိမ့်တာမဟုတ်ပဲ ”ထင်”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန်ကြောင့်သာ နိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တာပါ… ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီ လိုနူးညံ့တဲ့ပိတ်စ တစ်ခုဟာ သင့်ကိုဘယ်လိုများဒုက္ခရောက်စေမလဲ။ ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုတာက သင်ထင်သလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး ”ဘုန်းနိမ့်ပြီဟဲ့”ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ negative feelingဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ စိတ်အလိုမကျဖြစ်စေတယ်… စိတ်ကို နောက်ကျိစေတယ် ၊ အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ” ”ဒါဆို အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဝင်ခဲ့မိရင်ရော နိမ့်မှာလား” ”အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ဖို့ တော့ စိတ်ကူးမရှိဘူး၊ လိုအပ်ခဲ့လို့ဝင်ရပြီဆိုလည်း ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့မယူဆပါဘူး။ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ အစွမ်းအစဖြစ်တဲ့ သီလသမာဓိပညာဟာ ဒီထဘီတန်းကြောင့် […]
Posted in: Books, QuotesLeaveacommentMM Book City	 21/02/2018
တစ်ခါတုန်းက……… *ရွာတစ်ရွာတွင် ရုပ်အလွန်ဆိုးသော မိန်းခလေးတယောက်ရှိတယ် မိန်းခလေးသည် မှန် ကြည့်မိတိုင်း သူ့ကိုယ်သူ ဒေါသထွက်၍ မှန်ကိုပါ ရိုက်ခွဲတတ်တယ် မိဘ ဖြစ်သူတွေကိုလည်း အမြဲအပြစ်တင်ပြီး လူ့ဘ၀ကို စိတ်ကုန်နေသည် ရုပ်ချောချော ရွယ်တူကောင်မလေးတွေ မြင်တိုင်း မနာလိုဖြစ်ကာ… ရန်ရှာတတ်လာသည် *လောကကြီးကို မျက်စိလည်ရောက်လာပြီး ကံ အဆိုးဆုံးလို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ထားသည်……* *တနေ့တော့….. ရွာထဲသို့ အလှူလာခံသော သူနဲ့ရွယ်တူ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့သည်….. အလှူခံ ကောင်မလေးသည် ခြေထောက်တစ်ဖက်က ထော့ကျိုးဖြစ်၍ လက်တဖက်ကမွေးရာပါ လက်ချောင်းလေးများမပါပါ..* *အလှူခံကောင်မလေးကုိတွေ့ရော ရုပ်ဆိုးကောင်မလေးက မေးတယ်…… * *နင်* လက်ရှိ နင့်ဘ၀ကိုစိတ်မပျက်ဘူးလား???လို့မေးတော့ ကောင်မလေးက * လူ့ဘ၀က ငါတို့အရင်ဘ၀က လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြန်အကျိုးပေးတာပါ စိတ်ပျက်နေလို့ရော ဘာဖြစ် လာမှာလဲ???? […]
Posted in: Featured, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 21/02/2018
​နွေရဲ့ သ​င်္ကေတ​ပေါ့ ​ရော်​ရွက်​တို့​မြေမှာ ​လျှောက်​လှမ်း​နေကြတယ်​ ​​ကောင်းကင်​ရဲ့ မျက်​ရည်​စ​တွေ​ခြောက်​ခမ်းချိန်​မို့ ​မြေသင်းနံ့ ​တွေ ​ပျောက်​ဆုံး​ပြီ​လေ တစ်​​ကောင်​တည်း လွမ်း​တေးသီးတဲ့ ဥသြရဲ့ အလန်းသံက တစ်​ခုခုကို ​ခေါ်​ဆောင်​သွားသလို ဒီ​နွေ သစ္စာ ရှိတယ်​ ​မိုးစက်​တို့လည်း​ပြေးပုန်းတတ်​တယ်​ နှင်းစ တို့လည်း ​ရှောင်​လွဲ​ပေးတယ်​ တစ်​စစနဲ့ ကျိုးပြတ်​ ခဲ့​တဲ့ အချိန်​​နေ့စွဲ​တွေ တစ်​ရက်​ပြီးတစ်​ရက်​ တစ်​နှစ်​ပြီးတစ်​နှစ်​ ​နောက်​ပြန်​လှည့်​လို့မရတဲ့ ​လောကအမှန်​တရား​ပေါ့ ကျဆုံးခန်း​တွေ ​ပိုင်​ဆိုင်​လိုက်​ရတာ​တွေ ​နောက်​ဆုံးဘာ​တွေပါသွားမလဲ ​ရော်​ရွက်​ဝါ ​နေပြီး ရွက်​သစ်​မှာ​ရော အလှစစ်​နဲ့ စိမ်းနိုင်​ပါ့မလား သုံးသပ်​ခန်း​တွေခဏပိတ်​ပြီး ရုန်းထွက်​လိုက်​တယ်​ လ္ဘက်​​ခြောက်​ကျကျ​လေးနဲ့ ​ရေပူတစ်​ခွက် ရင်​ပူမှုကို ​အေး​စေတယ်​ဆိုတာ ယုံတယ်​ ​နွေ။ အိစက်​ခြင်းမရှိတဲ့ လမ်းတ​စ်​​လျှောက်​ အိစက်​ခြင်းမရှိ​တော့တဲ့ ရွက်​​ခြောက်​​လေး​တွေကြည့်​ရင်း မွန်​မြတ်​ တဲ့ လှဲကျင်းခြင်းမှာ သန့်​စင်​သွားပါရ​စေ ​နွေ။ […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 21/02/2018